Kaleidoscope: App iray hafa ho an'ny Apple ho an'ny folder, kaody ary sary
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia nitaky lamina vaovao ho an'ny pejin-tranony izay nitaky fivoarana kely nanerana ireo pejin'ilay lohahevitra. Na dia tsara momba ny kaody fanehoan-kevitra aza izahay dia tsy nanangona antontan-taratasy feno momba ireo rakitra vaovao sy navaozina izay novolavolainay ary tsy nanamarina ny fanovana tsirairay ho tahiry (ny mpanjifa sasany dia tsy maniry izany). Aorian'ny zava-misy dia tsy mahafinaritra ny miverina manadihady
Talata, Aogositra 20, 2013 Alakamisy, May 8, 2014 Douglas Karr
Tumult Hype dia rindranasa Mac OS X izay mamela anao hamorona atiny sy sary mihetsika mifandraika amin'ny atiny web HTML5. Pejy namboarina niaraka tamin'ny fiasan'ny Tumult Hype amin'ny birao birao, finday avo lenta ary iPads tsy mila kaody. Azonao atao ny mividy kopian'ny Tumult Hype 2 amin'ny App Store hatramin'ny Sept 10 amin'ny $ 29.99! Ny kinova Hype (Mac OS X) dia misy fiasa manintona sy mifampiresaka, ao anatin'izany ny: Animations - Tumult Hype's keyframe-based animation system dia mitondra ny